Ụtụ isi na France maka ndị mba ọzọ: usoro ụtụ isi, ụlọ akụ na ụba, nkwụghachi ego
Edere site Tranquillus | June 25, 2018 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Ndi mmadu obula bi na France aghaghi iku ya ụtụ isi na France, na mba ọbụla. Ego ha na-akpata na-ewerezi ego ha maka ịgbakọ ụtụ.
Tụ isi: obibi ụtụ isi na France
Ụtụ isi na France gbasara ndị amaala France bụ ndị ụlọ ụtụ isi ha dị na France, ma ndị mba ọzọ si n'ọnọdụ ụfọdụ.
Kpebie ebe obibi ụtụ maka ụtụ isi
Site n'echiche nke ụtụ isi, na iji kwado ụlọ ezinaụlọ nke otu na France, otu aghaghị imezu ọnọdụ ụfọdụ. Ọ bụrụ na otu n'ime ọnọdụ ndị a mezuru, mgbe ahụ, a na-ewere onye ahụ metụtara domiciled ke France.
Ebe obibi obibi (ma ọ bụ nke ezinụlọ) ma ọ bụ isi ebe obibi dị na mpaghara France.
Ịrụ ọrụ ọkachamara, ụgwọ ma ọ bụ na ọ bụghị, na France.
Ọnọdụ akụ na ụba na nke onwe onye dị na France.
N'ihi ya, onye na-ahọrọghị ebe obibi ụtụ mmadụ, n'ezie ọ na - enweta site n'ọtụtụ iwu na iwu. A na-atụ ụtụ isi na-abụghị ndị bi na France na ego ọ na-enweta site n'aka ndị isi French. A na-akwụ ụgwọ maka ụgwọ ọrụ ọ na-enweta maka nkwụghachi ụgwọ maka ọrụ na ala French.
Ihe ka ukwuu n'ime nkwekọrịta ụtụ isi mba ọzọ na-enyezi ihe a maara dịka iwu nkenke oge. Ndị ọrụ ndị na-erughị oge 183 na France adịghị edo ụtụ maka ego a rụpụtara n'ihe metụtara ọrụ a.
Kedu ka ụtụ isi e mere na France?
A na-atụ ụtụ isi na France na ụtụ ego dị iche iche nke ụlọ ụtụ isi. Ha nwere ike si na isi mmalite dị iche iche: ụgwọ ọrụ, ụgwọ ezumike nká, ịgbazinye ego, ego si n'ala, wdg. Ụlọ ụtụ isi kwekọrọ n'onye ụtụ isi na nwunye ya, kamakwa ụmụ ya na-ekwupụta na ọ dabere. Mgbe ahụ, a na-eke ego niile nke ezinụlọ dịka ọnụọgụ nke ọnụahịa.
Na nlele ụtụ, otu òkè site na onye okenye na ọkara òkè maka ụmụaka abụọ mbụ. Nwa ọ bụla site n'afọ nke atọ na-adabere n'otu òkè. Ọnụ ụtụ isi a na-etinye n'ọrụ na-adabere n'otú ezinụlọ na ego si.
A na-etolite ogo ogo ụtụ ahụ n'etiti 0 na 45%. Na France, ndị na-akwụ ụtụ isi na-atụ ụtụ na ego ndị France na ego ha si mba ọzọ, n'agbanyeghị mba ha si.
Ịda ụtụ na akụ na ụba
ISF bụ ụtụ isi nke ndị mmadụ na-enwerịrị ihe karịrị ọnụ ụzọ akọwapụtara na 1er January. Ndi mmadu nwere ulo oru ego ha na French ga-akwụ ISF maka ihe onwunwe ha nile nke di na France na n'èzí France (dika mgbako mba nile). A ghaghị izere ụtụ isi abụọ na enweghị mgbakọ mba ụwa.
A ga-atụ ụtụ ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ ụtụ isi na France maka ihe onwunwe ha dị na ala French. Ihe ndị a bụ ihe onwunwe nke ihe onwunwe, ezigbo ala na ụlọ ikike. Enwere ike ịkwuru onye nwere ụgwọ na France nakwa nke ụlọ ọrụ iwu kwadoro nke isi ụlọ ọrụ ya dị na France, ma ọ bụ nke French State.
N'ikpeazụ, òkè na mbak nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ iwu kwadoro na-edeghị aha na ahịa ahịa na ihe onwunwe ha nwere ihe ka ukwuu nke ezigbo ikike ụlọ na ezigbo ala dị na France.
Ụtụ isi nke ndị bi na France
Ndị bi na France na ebe obibi obodo ha dị na ala French ga-emerịrị ma mezue nloghachi ego ha na France.
Ụtụ isi nke French
Onye ọ bụla bi na France ga-anọ n'ọnọdụ yiri nke ndị ụtụ isi France. Ego ha na-enweta bụ ihe a na-akwụ ụtụ isi: ego ha na-enweta site na French na nke mba ọzọ.
Ndị a ga-edebanye aha na ụlọ ọrụ ụtụ isi. N'ihi ya, ọ bụrụ na ha na-akwụ ụtụ isi na France, ha na-enwekwa uru dịka ụtụ isi dị iche iche na ụtụ ego ndị a na-akwụ maka na ikike iji chọpụta ego a ga-akwụfu na ego ha.
Ọchịchị nke ndị isi obodo
Ọ na - eme na ndị isi si mba ọzọ na - arụ ọrụ na France. Ruo afọ ise, ha anaghị atụ ụtụ na ego ha na-enweta na France. Ndị ọkachamara ahụ metụtara ọrụ nke ụtụ isi a na France bụ:
Ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike ma choro nkà ha. Ọtụtụ mgbe, ebe ndị ọkachamara na-enwe ajụjụ nwere ihe isi ike na-enyocha na France.
Ndị na-etinye ego na isi obodo nke ụlọ ọrụ kemgbe 1er January 2008. A ghaghị izute ọnọdụ ego ụfọdụ.
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ na mba France.
Ndị ọrụ na ndị ọrụ a na-akpọ mba ọzọ maka nzube nke ijide ọnọdụ na ụlọ ọrụ dị na France.
Ọchịchị ụtụ maka "ndị ọhụụ"
Otu ụtụ isi maka ụtụ isi na-emetụta ndị mmadụ na-anọkwa ọzọ na France mgbe ha zigara ndị ọzọ na 1er Jenụwarị 2008. Onye ọ bụla kwagara France na-ahụ ụgwọ ọrụ ha agbakwunyere na nwa oge nke abụọ anaghị akwụ ụtụ isi ruo 30%. Ọnụego a nwere ike ịrị elu na 50% maka ụfọdụ ego mba ọzọ.
Tụkwasị na nke ahụ, akụ na ụba nke France adịghịkwa atụ ụtụ isi na afọ ise mbụ na France.
N'agbanyeghị ọnọdụ ya, ọ ka mma ịchọta ndụmọdụ nke ndị isi ụtụ isi nke France. Ọ ga-enwe ike ikpebi ọnọdụ ị ga-etinye n'ụlọ ezinaụlọ si mba ọzọ bịa na France. O nwekwara ike ịjụ nkwekọrịta ụtụ isi dịka obodo si mba ọzọ. Na nke a, onye nkwekọrịta ahụ nwere ike inye azịza bara uru maka ihe ndị ọ bụla.
Onye ọ bụla nwere ụlọ ọrụ ụtụ isi na France ga-akwụ ụtụ isi ya na France. Ihe niile a choro bụ na isi ụlọ (ma ọ bụ ezinụlọ ya) bi na ala French. O nwekwara ike ịbụ ihe gbasara akụ na ụba ma ọ bụ onyeyana ọrụ ọkachamara ya. Ndị mba ọzọ bụ ndị na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ na France aghaghị ime ka ha laghachi azụ na France.
Ụtụ isi maka ndị mba ọzọ na France Machị 7th, 2020Tranquillus
gara agaUsoro ntinye na visa na paspọtụ na France
-esonụDebanye ụmụ gị n'ụlọ akwụkwọ French